Shiinaha Forklift qar for Linde iyo BYD Shiinaha OEM warshad soo saareyaasha iyo soo saarayaasha | Hygg
Ku qarka forklift waxaa lagu soo uruuriyay taayirro si aad u qaadatid miisaanka weyn ee gawaarida oo aad ugu rogrogmadaan xaalado kala duwan. Wareeg forklift waxay muhiim u tahay nolosha forklift iyo waxtarka hawlgalka, waa wax fiican qarka forklift qaadi kara culeys aad u weyn wuxuuna ka caawin karaa forklift inuu si habsami leh oo hufan u socdo. Aad ayey muhiim ugu tahay forklift inuu yeesho xoog, la isku halleyn karo oo sahlan in la fuuloqarka forklift. Alaabtayada HYWGqarka forklift waa xulasho wanaagsan milkiilayaasha forklift maxaa yeelay waxaan helnay tayo, qiimo wanaagsan iyo xirmooyinka buuxa ee forklift inta badan noocyada. Waxaan nahay soosaaraha qarxinta OEM ee magacyada waaweyn sida Linde iyo BYD.
Waa maxay khafiifka forklift?
Ku qarka forklift waxaa si wada jir ah loola kaashanayaa taayirrada si ay u qaadaan culeys aad u ballaaran oo gawaarida isla markaana si dhakhso leh ugu rogaan xaalado kala duwan. Wareeg forklift waxay muhiim u tahay nolosha forklift iyo waxtarka hawlgalka, waa wax fiican qarka forklift qaadi kara culeys aad u weyn wuxuuna ka caawin karaa forklift inuu si habsami leh oo hufan u socdo. Aad ayey muhiim ugu tahay forklift inuu yeesho xoog, la isku halleyn karo oo sahlan in la fuuloqarka forklift. Alaabtayada HYWGqarka forklift waa xulasho wanaagsan milkiilayaasha forklift maxaa yeelay waxaan helnay tayo, qiimo wanaagsan iyo xirmooyinka buuxa ee forklift inta badan noocyada. Waxaan nahay soosaaraha qarxinta OEM ee magacyada waaweyn sida Linde iyo BYD.
Immisa nooc oo wareeg ah forklift?
Waxaa jira noocyo badan oo ah qarka forklift, oo lagu qeexay qaab dhismeedka wuxuu u kala qaybsanaan karaa qar, 2-PC, 3-PC iyo 4-PC. Split rim waa yar yihiin waana fududahay waxaana u isticmaala forklift yar, 2-PC rim waa fududahay in la fuulo, 3-PC iyo 4-PC rim waxaa loo isticmaalaa forklift dhexe iyo weyn, waxay qaadi karaan culeys culus iyo xawaare sare. Fargeetooyinka korantada sameeya waxay u muuqdaan inay adeegsadaan 3-PC iyo 4-PC rim maxaa yeelay isla cabirka cabirka ayaa xambaari kara culeys badan waxayna ka sii aamusan yihiin noocyada kale ee qarka.
Maxaa loo yaqaan 'forklift rim' oo loo isticmaalo?
Kuweena qarka forklift waxaa loo isticmaali karaa noocyo kala duwan sida:
Cabirka khafiifka ah Nooca Rim Cabbirka taayirka Qaabka mashiinka
3.00D-8 Kala 5.00-8 Linde, Toyota, Nissan
4.33R-8 Kala 16x6-8 Linde, Toyota, Nissan
4.00E-9 Kala 6.00-9 Linde, Toyota, Nissan
5.00F-10 Kala 6.50-10 Linde, Toyota, Nissan
5.00S-12 Kala 7.00-12 Linde, Toyota, Nissan
7.00x20 2-PC 9.00-20 BISAD
Faa'iidooyinkayada forklift rim?
(1) Waxaan bixin karnaa oo keliya qarka forklift dhameystiran laakiin sidoo kale qarka forklift qaybaha sida giraanta qufulka, giraanta kooxda, flanges iyo kuraasta kuusha.
(2) Faa'iidadayadu waxay tahay inaan haysanno milkiile bir ah oo noo soo saara qaybo ka mid ah darafyada sida giraanta qufulka, flange, giraanta dhinaceeda, kursiga kuusha 100% annaga lafteenna, waxaan bixinnaa tayo heer sare ah iyo qiimo macquul ah.
(3) Waxaan leenahay tiro buuxda oo ah qarka forklift oo ay ku jiraan khafiifka kala-jajaban ee warshadaha, 2-PC rim, 3-PC rim iyo 4-PC rim, waxaan bixin karnaa dhammaan noocyada kala duwan ee qarka forklift.
(4) Tayadayada waxaa cadeeyay OEM weyn sida Linde, BYD iyo soosaarayaasha kale ee forklift.
Hore: Qodista Macdanta Shiinaha OEM cabbirka soo-saaraha laga bilaabo 33 ″ ilaa 63 ″
Xiga: Cirifka warshadaha ee shirkadda Boom wiishka waxsoosaarka Shiinaha